अध्याय ७ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
हाम्रो वरपरका वातावरणहरूको उदयले हामीलाई आत्मामा शरण लिनको लागि वाध्य पारेको छ। पवित्र आत्मा चिन्तित भए नभएको बेवास्ता गर्दै, कठोर हृदयले कार्य नगर, र चतुर बन्ने कोसिस नगर। आत्म-तृप्‍त र आत्मसन्तुष्ट नबन वा आफ्ना कठिनाइहरूलाई धेरै नबढाओ। गर्नुपर्ने एक मात्र कुरा आत्मा र सत्यतामा परमेश्‍वरको आराधना गर्नु हो। तँ परमेश्‍वरका वचनहरूलाई पछाडि सार्न सक्दैनस् वा तिनीहरूप्रति बहिरो बन्न सक्दैनस्; तैँले तिनीहरूलाई ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ, तैँले प्रार्थना र वचन पाठ गर्ने कार्यलाई दोहोर्याउनुपर्छ, र वचनमा भएको जीवनलाई बुझ्नुपर्छ। तिनीहरूलाई राम्ररी पचाएर बुझ्नका लागि समय नदिई, खाली सरसरती मात्र पढेर, आफूलाई भ्रमित नतुल्याओ। के तँ आफूले गर्ने सबै कुरामा परमेश्‍वरका वचनहरूमाथि भरोसा गर्छस्? बच्चाले जस्तै घमण्डका साथ कुरा गर्ने अनि समस्यामा पर्दा सबै कुराहरू भताभुङ्ग पार्ने काम नगर्। तैँले हरेक दिन हरेक क्षण आफ्नो आत्माको अभ्यास गर्नुपर्दछ; एकछिन पनि खेर नफाल्। तँमा उत्सुक आत्मा हुनुपर्छ। तैँले जस्तोसुकै व्यक्ति, घटना, वा परिस्थितिको सामना गर्नु परे तापनि, यदि तँ परमेश्‍वरका अघि आउँछस् भने तैँले पछ्याउनुपर्ने मार्ग अवश्य प्राप्त गर्नेछस्। तैँले दिनहुँ परमेश्‍वरका वचनहरूलाई खानु र पिउनु पर्दछ, लापरवाही नगरिकन तिनीहरूको अर्थ बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ, यसको निम्ति थप कोसिस गर्नुपर्दछ, विषयवस्तुको सूक्ष्म रूपले सार बुझ्नुपर्छ, ताकि परमेश्‍वरको इच्छाको गलत अर्थ नलगाई तैँले सत्यतालाई सही ढङ्ग तथा पूर्ण रूपले बुझी आफूलाई सुसज्जित पार्न सक्। तैँले आफ्नो अनुभवको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ र परमेश्‍वरका वचनहरू अनुभव गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ। अनुभवको माध्यमबाट तँ परमेश्‍वरबारे अझ निश्चित हुन सक्‍नेछस्; अनुभव विना, उहाँको बारेमा निश्चित हुन गरिएका दाबी केवल खोक्रो शब्दहरूको एक पोको मात्र हुनेछ। हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ! ब्यूँझ! अब सुस्त नबन; यदि तिमीहरूले काम-कुराहरूलाई असावधानीपूर्ण तरिकाले व्यवहार गर्छौ, प्रगतिको लागि प्रयास गर्दैनौ भने तिमीहरू साँच्‍चिकै अन्धो हौ। तिमीहरूले पवित्र आत्माको कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, पवित्र आत्माको आवाजलाई ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ, आफ्ना कानहरू परमेश्‍वरका वचनहरूको लागि खोल्नुपर्छ, तिमीहरूसँग बाँकी भएको समयमा रमाउनुपर्छ, र चाहे जेसुकै भए पनि मूल्य चुकाउनुपर्छ। जब तिमीहरूसँग स्टील हुन्छ, यसलाई आवश्यक ठाउँमा प्रयोग गर–बलियो ब्लेड बनाउन प्रयोग गर; जुन कुरा महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई राम्ररी पक्र, र परमेश्‍वरका वचनहरूलार्इ अभ्यास गर्ने कुरामा ध्यान देओ। यदि तिमीहरूले परमेश्‍वरका वचनहरूलाई छाडेका छौ भने, तिमीहरूले बाहिरी रूपमा जति नै राम्रो काम गरे पनि, त्यो कुनै कामको हुँदैन। केवल मुखले मात्र ठिक्क पार्ने कुरा परमेश्‍वरलाई स्वीकार्य हुँदैन; तिमीहरूको व्यवहार, स्वभाव, आचरण, विश्‍वास, साहस र अन्तर्दृष्टिबाट नै परिवर्तन आउनुपर्छ।
समय नजिकै छ! यस संसारका सबैभन्दा राम्रा चीजहरू पनि नष्ट हुनेछन्। जस्तो सुकै कठिनाइ वा खतराहरूले हामीलाई वशमा पार्न सक्दैन, न त हामी डगमगाउनेछौं, चाहे आकाश नै किन नखसोस्। यस्तो प्रकारको दृढ संकल्प विना तिमीहरू सजिलैसँग एक महान् व्यक्तित्व बन्न सक्दैनौ। जो कमजोर हृदयका छन् र जो जीवनको सांसारिक मोहमा अल्झिरहन्छन्, तिनीहरू परमेश्‍वरका सामु उभिन योग्य छैनन्।
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर एक व्यावहारिक परमेश्‍वर हुनुहुन्छ। हामी जतिसुकै अज्ञानी भए तापनि उहाँले हामी माथि दया राख्नुहुनेछ, उहाँका हातहरूले हामीलाई पक्कै मुक्ति दिनुहुनेछ, र उहाँले हामीलाई अझ पूर्ण बनाउनुहुनेछ। जबसम्म हाम्रो हृदयले परमेश्‍वरलाई साँच्चिकै चाहन्छ, जबसम्म हामीले नजिकबाट उहाँलाई पछ्याउँछौं र निराश हुँदैनौं, र जबसम्म हामी जोडतोडले खोज्छौं, तबसम्म उहाँले हामी कसैलाई पनि कुनै प्रकारको पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नुहुनेछैन; हामीमा भएको अभावलाई उहाँले अवश्यै पुरा गरिदिनुहुनेछ र हामीलाई सन्तुष्ट पार्नुहुनेछ। यी सबै कुरा सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको अनुकम्पा हो।
यदि कोही घिचुवा र अल्छी छ भने उनीहरू खाली पेट भर्नकै लागि मात्र जीवन जिउँछ भने, र सबै कुराप्रति लापरवाह हुन्छन् भने, उनीहरूलाई दुःखकष्टको नोक्सानबाट जोगिन गाह्रो हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्‍वरले सबै चीज र घटनाहरू माथि प्रभुत्व गर्नुहुन्छ। जबसम्म हामी उहाँलाई हरबखत आफ्नो हृदयमा नियाल्छौं र उहाँसँगै आत्मा र सङ्गतिमा प्रवेश गर्दछौं, उहाँले हामीलाई हामीले खोजेका सबै चीजहरू देखाउनु हुनेछ, र उहाँको इच्छा हामीलाई निश्चित रूपमा प्रकट गर्नुहुनेछ। तब हाम्रो हृदय आनन्दित र शान्त हुनेछ, पूर्ण स्पष्टताका साथ स्थिर पनि हुनेछ। उहाँको वचनहरू अनुरूप कार्य गर्न सक्षम हुनु महत्त्वपूर्ण छ। केवल उहाँको इच्छा अनुसार र उहाँको वचनमा निर्भर भर्इ जीवन जिउन सक्षम हुनु वास्तवमै एक साँचो अनुभव हो।
यदि हामी परमेश्‍वरका वचनहरू बुझ्छौं भने मात्र परमेश्‍वरको वचनहरू अर्थात् सत्यता हामीमा र हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्न सक्षम हुनेछ। कुनै व्यावहारिक अनुभवविना, तँ कसरी परमेश्‍वरका वचनहरूको वास्तविकतामा प्रवेश गर्न सक्छस्? यदि तैँले परमेश्‍वरका वचनहरूलार्इ आफ्नो जीवनको रूपमा लिन सक्दैनस् भने तेरो स्वभावमा परिवर्तन आउन सक्दैन।
पवित्र आत्माको कार्य जोडतोडका साथ अगाडि बढिरहेको छ! यदि तिमीहरूले ध्यानपूर्वक अनुसरण र प्रशिक्षण वा तालीम प्राप्त गरेनौ भने उहाँ अगाडि बढ्दै जानुहुँदा पवित्र आत्माको गतिसँग निरन्तरता दिन तिमीहरूलाई गाह्रो हुनेछ। छिटो गर र आमूल परिवर्तन ल्याओ, अन्यथा तिमीहरू शैतानको खुट्टाद्वारा कुल्चिइनेछौ र आगो र गन्धकको अतल कुण्डमा पुग्‍नेछौ, जहाँबाट उम्कने सम्भव छैन। अब जाओ, र सक्दो प्रयास गर, ताकि तिमीहरू त्यागिनदेखि बच्‍न सक।
अघिल्लो: अध्याय १०३
अर्को: अध्याय ६२